Resaka tsy nifankahazo : Nametrapetraka ireo mpankafy azy ny tarika Kiaka -
AccueilVaovao SamihafaResaka tsy nifankahazo : Nametrapetraka ireo mpankafy azy ny tarika Kiaka
Resaka tsy nifankahazo : Nametrapetraka ireo mpankafy azy ny tarika Kiaka
25/09/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Tsy tonga hatramin’ny farany. Nametrapetraka ireo mpankafy azy ny tarika Kiaka, raha tokony hanolotra seho takariva ny zoma lasa teo tetsy amin’ny Trass Tsiadana. Tsy tonga teny an-toerana ny tarika, ary tsy nandray ny antso an-tarobia raha niezaka niantso azy ireo ny mpikarakara ny hetsika, ny tompon’andraikitry ny Trass eny Tsiadana. « Tsy nisy fampilazana na fialan-tsiny fa dia tsy tonga fotsiny izao izy ireo… Nanahirana ny nahazo azy ireo tamin’ny antso. Nisy azo ihany ny sasany tamin’ireo mpikambana izay nanazava fa miady an-trano ny tarika », araka ny fampitam-baovaon’ny Trass Tsiadana. « Tena manaiky ny fahadisoana izahay, ary mitondra ny teny fifonana amin’ireo mpankafy fa resaka tsy nifankahazo, fampitaom-baovao tsy nety no niteraka ny tsy fahatongavana », hoy kosa i Nini avy amin’ny tarika Kiaka raha nitondra fanazavana.
Nahagaga ireo mpankafy ity tarika izay vao avy nankalaza ny faha-25 taonany io tranga io, ary nanitikitika azy ireo amin’izao tranga izao ny fisian’ireo mpikambana ao amin’ny tarika, manana andraikitra na miara-dia amin’ny mpanakanto hafa andaniny, ary ireo manana ny asa aman-draharaha fivelomana ankilany, ka mahatonga azy ireo hanao tsinontsinona ny fiainan’ny tarika. « Tsy fahalalam-pomba, ary fanaovana tsinontsinona ny mpankafy ny tranga toa izao », hoy kosa ireo mpankafy nody maina, niandry ny tarika Kiaka teny Tsiadana. « Tena mitondra ny teny fialan-tsiny ho an’ny mpankafy izahay, ary mandray an-tanana fa fahadisoana avy aminay iny tranga iny », hoy hatrany i Nini, nanamafy ny fialan-tsininy.
Minisitra Roland Ravatomanga : Miraviravy tanana amin’ny olan’ny rano
Orinasa Fanalamanga : Nirehitra ny orinasa fitehirizana solika
Association des Amis de Vatovavy : Nanolotra kaontera ho an’ny Jirama
Diplomaty amerikanina : Manjavozavo ny raharaha
Ady amin’ny fiparitahan’ny basy : Nohamafisina ny fomba fiasa
удължаване на пенис dans Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE
jav18+ dans « Insécurité publique et disfonctionnements de nos institutions »
clothing woman within dans Sortie de Air Madagascar de l’annexe B
ze sklejki dans Sortie de Air Madagascar de l’annexe B
Elliot Mcglumphy dans Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE
Ao anatin’ny krizy lalina ny firenena ny taona 2013, mbola voasazin’izao tontolo izao i Madagasikara ary saika nanakatom-baravarana ny ankamaroan’ny orinasa teto ankoatra ireo voatery nandroaka mpiasa vokatry ny fikatsoan’ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny, indrindra ny ...Tohiny
удължаване на пенис: Good day I am so happy I found your webpage, I really found you by accident, while I…
jav18+: At this time it looks like Expression Engine is the top blogging platform available right now. (from what I've read)…
clothing woman within: What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it…